ဒူးနာနေရင် ဒါတွေကို လုပ်ကြည့်ပါ | Page2| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ဒူးနာနေရင် ဒါတွေကို လုပ်ကြည့်ပါ
လောလောလတ်လတ် ထိခိုက်မိလို့ ဒူးနာတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဆစ်အမြစ်ရောင်လို့ နာတာရှည် ဒူးနာနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒူးနာသက်သာစေဖို့ ဒါတွေလုပ်ကြည့်ပါ။
1. လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။ နှလုံးကျန်းမာစေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ အကြောလျှော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေက ဒူးခေါင်းကြွက်သားတွေကို သန်မာစေပြီး ကွေးဆန့်နိုင်စွမ်းကိုလည်း ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ရေကူးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း စတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ပေးပါ။ တိုက်ချိကစားခြင်းက တောင့်တင်းမှုတွေကို သက်သာစေပြီး ဟန်ချက်ညီစေပါတယ်။
2. အနားယူခြင်း၊ ရေခဲဝတ်ကပ်ပေးခြင်း၊ ခြေထောက်မြှင့်ထားခြင်းတွေက ဒူးနာသက်သာစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒူးခေါင်းကို ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီး အရောင်သက်သာစေဖို့အတွက် ရေခဲဝတ်ကပ်ပေးခြင်း၊ ကျုံ့ဆန့်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ပတ်တီးစည်းပေးထားခြင်း၊ နဲ့ ဒူးခေါင်းကို မြှောက်ထားခြင်းတွေလုပ်ပေးပါ။
3. အပ်စိုက် ကုသနိုင်ပါတယ်။ တရုတ်ရိုးရာအပ်စိုက်ကုသခြင်းက နာကျင်မှု တော်တော်များများကို သက်သာစေပြီး ဒူးနာတာကိုလည်း သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
4. အပူအအေးလိုသလို အသုံးချပါ။ ဒူးခေါင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီး ပထမ ၄၈-၇၂ နာရီအတွင်းမှာဆိုရင် ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ နာကျင်ခြင်းသက်သာစေဖို့ ရေခဲဝတ်ကပ်ပေးပါ။ တစ်ခါကပ်ရင် ၁၅-၂၀ မိနစ်ခန့် တစ်နေ့ကို ၃-၄ ကြိမ် ကပ်ပေးပါ။ အရေပြားကို မထိခိုက်စေဖို့ ရေခဲဘူးကို ပဝါနဲ့ပတ်ပြီးမှ ကပ်ပေးပါ။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ရေနွေးအိတ်ကပ်ပေးပါ။ တစ်နေ့ကို ၃-၄ ကြိမ် တစ်ခါကပ်ရင် ၁၅-၂၀ မိနစ်ခန့် ကပ်ပေးပါ။
5. ဆရာဝန်ရဲ့ အကြံဉာဏ်ရယူပါ။ အခုမှ ဒူးနာတာဆိုရင် ဘာကြောင့်နာတယ်ဆိုတာသိဖို့ ဆရာဝန်ပြပြီး ကုသမှုခံယူပါ။
၁.၆.၂ဝ၂ဝ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
သွေးတိုးခြင်းကြောင့် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်စေတာ ကျွန်ုပ်တို့ သိကြပြီးဖြစ်တာကြောင့် ယခုအခါ သွေးပေါင်ကျခြင်းအကြောင်းကို တင်ပြပါမယ်။ သွေးပေါင်ကျခြင်းဟာ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ လက်ခံနိုင်ပေမယ့် အခြားသောလက္ခဏာများပါ တွဲဖက်ဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ မပေါ့ဆသင့်ပါဘူး။
>> သွေးပေါင်ကျခြင်း လက္ခဏာများ...
၃၁.၅.၂ဝ၂ဝ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
မှက်ခရုဟာ Candida albicans လို့ခေါ်သော မှိုတစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်သော ပါးစပ်တွင်းပိုးဝင်ခြင်းတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးများတွင် ဖြစ်လေ့ရှိပြီး ကိုယ်ခံအားနည်းသော မွေးကင်းစကလေးငယ်များတွင်လည်း အဖြစ်များပါတယ်။
● လျှာနှင့် ပါးစပ်အတွင်းမှာ အဖြူရောင်အဖပ်များ ဖြစ်ပေါ်ခြ...